Suren Upreti | Nepali Stories
Suren Upreti – Campus Ko Bhet
सुरेन उप्रेती – क्याम्पसको भेट
प्रविणलाई कक्षा शुरुहुनु अगावै एउटा किताव लिनु थियो । उ हतार हतार लाइब्रेरीतिर जाँदै थियो । हाए प्रविण भनेको सुनेर यता उता हेर्यो । सिन्थियाले बोलाएको रहेछ । उनले आएर प्रविण सँग हातमिलाइन । सामान्य भलाकुसारी पछि म अलि हतारमा छु पछि कुरा गरौँला हुन्न भनेर अगाडी बढयो । सिन्थियाले प्रविण तिमीलाई थाहा छ उ मेरी साथी पनि नेपाली हुन नी । उनको नाम कुशुम हो भनेर साथी तिर देखाइन् । नमस्ते म प्रविण भनेर कुशुम तिर हेरयो । म कुशुम भनेर उनले पनि हात हल्लाइन् ।
प्रविण उनीहरु सँग छुट्टिएर लाइब्रेरीमा गयो । हतार हतार किताव लिएर कक्षामा आयो । उसलाई कता कता कोहि चिनेको आफन्त भेटे जस्तो लाग्यो । हुन त विदेशमा पुगे पछि आफ्नो देशको मान्छे भने पछि आफन्तनै भेटेजस्तो हुनु श्वभाविक नै हो तर पनि उसलाई अमm नजिकको कोहि भेटेजस्तो भएको थियो । उ कक्षामा पुग्दा शिक्षक आएर पढाउन शुरु गर्दै रहेछन् । उ सँधै पहिलो लाइनमा नै बस्थ्यो । आज पनि त्यहीँ ठाउँमा गएर बस्यो । शिक्षकले पढाएका कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्न निकै प्रयास गरयो । तर छिन छिनमा उसको मन अन्यत्रै घुम्दै हुन्थ्यो । आधा उधी मात्र नोट गरयो । कति अगाडी पछाडी छुटेर बिचका बूँदाहरुमात्र टिप्न भ्यायो । एक पटक शिक्षकले उसलाइ के साधेको रहेछ थाहानै पाएन । सबै साथीहरु हाँसेपछि मात्र थाहा भयो । उसका गाला राता भए । उसले आफुलाई तातो भएको महशूष गरयो ।
कक्षा सकिए पछि क्याफ्टेरियामा गयो । उसका आँखाले सबैैका अनुहार सर्सर्ती पढे हरेसखाइसकेका आँखाले हलको दाहिने तिरको कुनामा सिन्थियार कुशुमलाई देखेछन् । उ कसैले डोरयाएको वालक मmैँ केहि नसोची उनीहरु बसेको टेबलमा गएर चेयर तानेर बस्यो । उनीहरुले पिज्जा खान लागेका रहेछन् । उसलाई पनि खाँउ भने तर उ म लिएर आँउछु भनेर ब्याग चेयरमा राखेर क्याफ्टेरिया भित्र गयो ।
उ पढनमा मात्र हैन जुन खेलमा भाग लिन्छ त्यसमा पनि दोःश्रो हुँदैन । सारै मेहनती, प्रतिभाशाली र अशल छ । सिन्थियाले प्रविणको प्रतिभाको बारेमा कुशुमलाई सुनाइन । चिकेन ड्र्मस्टीक र राइस लिएर प्रविण आयो । उनीहरुलाई पनि ड्र्मस्टिक खान भन्यो । दुबैजनाले एक एक पिस लिए । गत बर्ष नेपाल जाँदा कुशुम र उनका बा आमा सँग भेट भयो र उनीहरुकै घरमा बसेँ । बुबा आमा सारै अशल हुनुहुन्छ भनेर सिन्थियाले सुनाइन । तिमीहरु नेपाली भाषामा कुरा गर न मलाई सुन्न सारै मन पर्छ भनेर कुरा गर्न अमm सजिलो बनाइ दिइन सिन्थियाले । दुबैले एक अर्काका बारेमा सोध खोज गरे । प्रविण तेश्रो बर्ष र कुशुम प्रथम वर्षमा वातावरण विज्ञान पढ्दै थिए । उनीहरुले पढाइका बारेमा पनि कुरा गरे । कुशुमले आफुलाई अप्ठयारो लागेका विषयका बारेमा सुनाइन । प्रविणले आफ्ना पुरानानोट खोजेर दिन्छु । न आएका कुरा सोध्नु भन् यो । फोन नम्बर आदान प्रदान गरेर उनीहरु छुट्टिए ।
कुशुम सिन्थियाको घरमा नै बस्थिन् । त्यहाँ बस्दा सबैै सुविधा भए पनि अलग अलग साँस्कृतिक पृष्ट भूमिबाट आएका हुनाले सिन्थिया र उनमा थुप्रै भिन्नताहरु थिए । एक अर्का सँग मिल्नलाई दुबैले परिस्थिति सँग थुप्रै सम्मmौताहरु गरेका थिए । तर पनि जीवनका दुई दसक भन्दा लामो दिनचर्या सँग अभ्यस्त जीवनबाट मुक्तहुन त्यती सजिलो कहाँ हुन््थ्यो र । भोलीभनेको अनिश्चित छत्यसैले जीवनको मज्जा आजनै लिनु पर्छ भन्थिन सिन्थिया । उनी बार,पवर , र रेष्टुरेण्टमा गएर हप्ताअन्त बिताउन चाहान्थीन् । तर यो सबै कुशुमको सोच विपरित थियो । यो समय भनेको भोलीको शुन्दर सन्सार निर्माण गर्नमा लगाउने हो । आज मेहनत गर्यो भने भोली सुख हुन्छ । परिश्रमको फलमात्र मिठो हुन्छ भन्नेमा कुशुम विश्वाश गर्थिन् ।
कुशुमलाई सिन्थियालाई जति सजिलो पनि त थिएन । नेपालबाट पठाएको पैसाले क्याम्पसको फि तिर्नु, कपी, किताव,खान,बस्न सम्पूर्ण खर्च पुर्याउनु पथ्र्यो । काम गर्दै पढ्नेबारेमा पनि नसोचेको होइन तर पढाइको बोमmले उनलाई उठ्नै दिएको थिएन ।
घरमा पुग्नसाथ सिन्थियालाई ब्वाइफ्रेण्डको फोन आयो र बाहिर निस्किन् । कुशुम बेडमा पल्टिएर दिँउसो पढेको नोट हेर्न थालिन् । तर उनका आँखा मात्र नोटमा अडिए । उनको मन प्रविणको बारेमा प्रश्णोत्तर गर्न थाल्यो । कति सरल छ उसको श्वभाव । त्यस्तो प्रतिभावान भएर पनि रतिभर घमण्ड छैन । लेखनाथ पौडेलको “ मmुक्छन् वृक्ष्य सदैव फलफूलले भारी हुँदामा अतित “भन्ने कविताको हरफ उनका बुवाले सँधै भन्ने गरेको याद आयो । उनलाई फोन गर्न मन लाग्यो । फेरी के सोच्ने होला भन्दै नोटकपिमै आँखा विक्ष्याइन् । आँखाले फोन नम्बर फेलापारे छन् । मन डराउँदै थियो । उनका ती साना सुरिला औँलाले फोन डायल गरे । अब के भन्ने होला भन्दै डराउँदै रिसिभरलाई कानको छेउमा राखिन् । तीन घण्टी जाँदा पनि फोन नउठे पछि फोन राखिन् । उनलाई त्यसै खल्लोे लाग्यो । कस्तो फोन गर्दा पनि नभेटिने मान्छे भन्दै अर्का तिर फर्किएर बेडमा पल्टिन । केहिबेर पछि उठेर नुहाउन गइन् । आज उनको मन निकै खुशि छ । उनी गीत गाँउन भने पछि चारकोस भाग्ने मान्छे तर आज उनलाई गीत गुनगुनाउन आयो । खुशि छु म आज तिमी भन्दा धेरै भन्ने गीतको पँत्तीलाई पटक पटक दोहोर्याएर तेहर्याएर गुनगुनाइन् । कपाललाई टावलले पुच्दै ऐनाको अगाडी गएर उभिइन । आफैँ सँग लाज लाग्यो । आँखा चिम्लिएर द्र्रूईहातले आँखा छोपिन् र अर्कातिर फर्किन् ।
प्रविण र कुशुमको भेट दिन दिनै हुन थाल्यो । कुशुमलाई प्रोजेक्ट गर्नु पर्दा, परिक्षाको तयारी गर्नु पर्दा प्रविणले सँधै सहयोग गथ्र्यो । प्रविणको प्रशँसा गर्दै सबै कुरा फोनबाट आमालाई सुनाइन । प्रदेशमा पनि त्यस्तो सहयोग गर्ने मान्छे कहाँ पाइन्छ र छोर्ी ? तिमी त सारै भाग्यमानी रैछयो आमाले भन्नु भयो । कुशुमको जन्म दिनमा उनलाइ सारै मन पर्नै एक जोडी लुगा किनिदियो । सिन्थिया र कुशुमलाइ रेष्टुरृण्टमा लगेर खाना ख्वायो । आमा लुगा त कति महँगो पो किनेको त , कस्तो राम्रो छ भनेर कुशुमले आमालाइ सुनाइन ।
विदेशमा गए पछि आफ्ना चाड पर्वको मmनै महत्व बढ्छ । दसैँ मनाउन अटवामा बस्ने सबै नेपालीहरु भेलाभए । प्रविण र कुशुम पनि कार्यक्रममा सहभागी भए । बिभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रम नाचगान पछि सबैले टिका लगाए । सबैका अनुहारमा हाँशो र खुशी छायोे । यस पालीको दसैँ त नेपालमा हँुदाको भन्दा रमाइलो भयो भनेर कुशुमले आमालाई फोन गरेर सुनाइन ।
क्याम्पसमा परिक्षाहरु आउने जाने क्रम चलिरहेको थियो । यो हप्तामा तीनवटा विषयको परिक्षा दिनु परेकाले कुशुम पनि पढ्दा पढ्दै दिक्क भएकी थिइन् । शुक्रबार बेलुका प्रविणको फोन आयोे । परिक्षाका बारेमा कुरा गरी सकेपछि भोली विहान मेरामा आउहै कुशुम भनेर प्रविणले बोलायोे । त्यस रात छट्पट् हुँदै पटक पटक बिउँमिmएर विहानीको पैतिक्षामा घडी हेरिन । मनले थुप्रै सपनाहरु बनायो । रात भरी राम्रो निन्द्रा लागेन । विहानी पख भए पछि निदाइछन् । सपना पनि कस्तो देखेको । उनले त तिजका महिलाहरुले जस्त्ौ पूरै राता लुगा लगाएको रहेछ रे । बिँउमmदा सात बज्नलागेको रहेछ । हतार हतार गरेर नुहाइन । एक कप चिया खाएर ऐना अगाडी गएर उभिइन् । आँखा सुन्नीए जस्ता भएर विमmाए ।
प्रविणकोमा पुग्दा साढे नौ नै भइ सकेछ । बैठकको शोफामा गएर बसिन् । बैठकको टेवलमा फलफ्रूलहरु सजाएर राखेका रहेछन् । अगाडी भित्तामा एउटी साडी लगाएकी केटीको फोटो मmुण्डिएको थियो । उनका आँखा त्यही फोटोमा गएर ठोक्कीए । अहा कस्तो मेरो जस्तै फोटो, यो कस्को फोटो ? कुशुमले सोधिन् । प्रविण उनका छेवैमा आएर शोफामा बस्यो । फोटोमा तेर्सिएका आँखा भरी आँशु बनाउँदै अब उनी छैनन् । यस धर्तिमा बाँच्न दिएनन् भनेर उ बोल्न सकेन । आँखाका आँशु पुक्ष्दै लामो सास तानेर फेरी बोल्न खोज्यो । उनी मेरी एकमात्र ))))) भनेर फेरी अड्कीयो । उनी तिमी जस्तै छन् है कुशुम भनेर कुशुमका हात समाएर चुम्यो । दुई बर्ष अगाडी दाइजो कम ल्याइ भनेर पटक पटक कुटेछन् र मट्टीतेल खन्याएर ))))) भन्ेर फेरी वोल्न सकेन । उठेर बाथरुम तिर गयो । मुख धाएर टावेलले मुख पुच्दै भान्सामा गयो । भान्साबाट एउटा ठूलो थाली लिएर आयो । थालीमा मैन वत्ती बल्दै थियो । एउटा ग्लासमा पानी थियो । ग्लासका छेउमा तीन चार थ्रूँगा फूलहरु थिए । छेउमा रातो,निलो , पँहेलो,र सेतो रँग थिए । आज मैले चार वर्ष पछि मेरी बहिनीलाई भेटेँ । तिमीलाई थाहा छ कुशुम ? आज भाइ टिका होनी भन्दै थालीलाई शोफा छेउको टेवलमा राखेर निधारबाट कपाललाई हातले पन्छाउँदै कुशुम तिर फर्किएर बस्यो ।
Posted in Suren Upreti
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Suren Upreti Literatures of Nepali Story Writer Suren Upreti Nepali Author Suren Upreti Nepali Katha Nepali Katha Campus Ko Bhet by Suren Upreti Nepali Kathakar Nepali Kathakar Suren Upreti Nepali Rachanakar Kathakar Suren Upreti Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Suren Upreti Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Suren Upreti Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Campus Ko Bhet by Suren Upreti Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Suren Upreti Read Nepali Stories Online Sahityakar Suren Upreti Ka Nepali Katha Haru Suren Upreti - Campus Ko Bhet Suren Upreti's Nepali Story Campus Ko Bhet